मल्लाज जाने बाटो- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
मल्लाज जाने बाटो
जिजुबाजेले एक शताब्दीअघि बनाएको दरबारलाई उनैका पनातिले निजी खर्च र उपायबाट रेट्रोफिट गराएपछि मल्लाज बस्तीमा रौनक थपिएको छ ।
मंसिर २०, २०७६ देवेन्द्र भट्टराई
संसारभर कुरियर ओसार्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी डीएचएलका कन्ट्री–म्यानेजर मुकुन्द मल्लले १० वर्ष यो कम्पनीमा काम गरेपछि एक रात सपनामा देखे— मल्लाज  । के थियो मल्लाज ? कहाँ थियो मल्लाज ? उनी सपनामै कुदिरहे  ।
भोलिपल्ट बिहानै उठेर झोलीतुम्बा बोक्दै उनी आफ्ना पितापुर्खाको थलोको खोजीमा निस्किए । मल्लाजका बारे किंवदन्तीझैं सुनेको दर्गादिशाका आधारमा मुकुन्द धौलागिरीको पर्वत जिल्ला आइपुगे, बेनी बजारबाट झन्डै १ घण्टा लगातार पूर्वी डाँडो उक्लिएपछि बाबुबाजेको मल्लाज भेट्टाए, अनि यतै जरो गाड्ने सुरसार कसिहाले ।
मुकुन्दले देखेको मल्लाज–सपनाअघिको कुरा गरौं । यो जिजुबाजे समयको कुरा हो, झन्डै डेढ शताब्दीअघिको कुरा । पर्वतको मल्लाजमा जन्मे–हुर्केका तेजबहादुर मल्ल अलिक फराकिलो र उज्यालो संसार खोज्दै नेपाल (काठमाडौं) गएका थिए । खाइलाग्दो ज्यानका उनी नेपाली सेनामा भर्ती मात्रै भएनन्, कर्णेलको तहसम्म पुगे । नामकाम, वैभव र सम्पत्तिसमेत साथमा भएपछि तेजबहादुर फेरि मल्लाज फर्किए । तर, बूढ्यौली बिताउन सुविधायुक्त दरबार बनाउने सोच लिएर ।
तेजबहादुर गाउँ फर्कंदा आफ्ना दुई आर्किटेक्ट सालाहरू कुमार र केदारनरसिंह रानालाई भनेर एउटा दरबार स्टाइलको भवनको नक्सासमेत बनाई मागेर ल्याएका रहेछन् । नरसिंह रानाहरू सिंहदरबार, शीतलनिवासको डिजाइनमा समेत जानकार थिए । त्यो डिजाइनअनुसार काम गर्ने दक्षतायुक्त कामदार भक्तपुरबाट साथैमा ल्याएर र मल्लकालीन शैलीमा माटो, सुर्की, पोलेका इँटाका भरमा २ वर्षमा मल्लाज दरबार बनिएको रहेछ ।
गाउँ फर्किसकेका कर्णेल
तेजबहादुरलाई तत्कालीन श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरले फेरि दार्चुलाको बडाहाकिम बनाएर पठाएका रहेछन् । उनी दार्चुला पुगे र उनको त्यतै निधन भयो । यसरी अनेक बलबुता र बर्गत खन्याएर दरबार उभ्याए पनि कर्णेल तेजबहादुरले यो दरबारमा बस्नै पाएनन् ।बाजे इन्द्रबहादुर मल्ल पनि केही वर्ष मात्रै यो दरबारमा बस्न पाए, बाबु जीवनबहादुरको पालादेखि त परित्यक्तझैं रह्यो । बितेको झन्डै ४० वर्ष दरबार बिनासुरक्षा–संरक्षण बस्यो । ११५ वर्षअघि बनेको र समय हिसाबमा ‘हेरिटेज’ भैसकेको यो सम्पत्तिमा न मल्ल परिवारका छोरानातिले ख्याल गरे, न गाउँले रखवाली कोही रहे । बीचको द्वन्द्वकालमा दरबारमा रहेका ऐतिहासिक सामान, बन्दुक, हातहतियार, भाँडाबर्तन सबै खोसाखोस भएको स्थिति रहेछ ।
गाउँ फर्क अभियान
भारतको चण्डीगढबाट मानविकीमा स्नातक मुकुन्दले काठमाडौं फर्केर केही वर्ष सोल्टी प्लाजामा बजार प्रबन्धक भएर काम गरेका थिए, लगत्तै उनी डीएचलको कन्ट्री–म्यानेजर बने । त्यसपछि स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी (एससीटी) मा काम गरिरहेकै बेला मल्लाज–सपना देखेर उनी गाउँ फर्केका हुन् ।
‘सन् २०१२ देखि २ वर्षभन्दा बढी दिनरात एक बनाएरै यो दरबार रेट्रोफिटिङमा लागें । चण्डीगढदेखि कर्नाल सिंह भन्ने साथी बोलाएर छानो रिपेयरमा आइडिया लिएँ । सुरुमा मक्किइसकेको स्लेटको छत निकाल्ने र यूपीबीसीको प्रि–फ्याब हाल्ने काम भयो,’ मुकुन्द सम्झन्छन्, ‘नयाँ संरचना थप्नेभन्दा पुराना कुरा कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नले बढी दिमाग र समय खायो, निर्माणभन्दा संरक्षणमा बढी पैसा खर्चनुपर्‍यो ।’
आजको पुस्ता सहरमुखी र पैसाकेन्द्रित भैरहेका बेला मुकुन्द आफ्नो प्रतिष्ठाको काम, मनग्य आम्दानी र परिवार सहरमै छाडेर मल्लाज फिरेका छन् । २२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ‘द हेरिटेज एट मल्लाज’ को ३ तले दरबारमा अहिले स्वदेशीभन्दा विदेशी आगन्तुक सम्पदा हेर्ने पाहुना बनेर आइरहेका छन् । दरबार हेर्न दिनहुँ आउने विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य आगन्तुकको संख्या पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
मल्लाज गाउँभरि ढुंगाका छपनीले छाएका परम्परागत घरहरू भेटिन्छन् । नेपालमै कहलिएको सुन्तला खेतीको गाउँ बाँसखर्क यही मल्लाजको अर्को छेउमा भेटिन्छ । बेनी बजार, म्याग्दी तातोपानी वा मुस्ताङ जाने यात्रुहरू पनि मल्लाज दरबार हेर्न गाउँ उक्लने गरेका छन् । ‘पाल्पा दरबार भन्नेबित्तिकै खड्गशमशेरले सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोतसाधन र शक्ति खर्चेर बनाएको दरबार हो । तर, यो भनेको एउटा मल्लाजवासी मल्ल कर्णेलले आफू र आफ्नो परिवार बस्न निजी हैसियतमा बनाएको दरबार हो,’ मुकुन्द भन्छन्, ‘आज मल्लकालीन सभ्यता, संस्कृति र सम्पदाको चिनारी दिने गरी यो दरबारको चिनारी बढेकोमा म आफू गाउँ फर्केकोमा धन्य ठानिरहेको छु ।’
मल्लाज गाउँको नाम अहिले बदलिएर जलजला गाउँपालिका बनेको छ । तर, चिन्नेहरू मल्लाज नामबाटै यो गाउँ र दरबारलाई चिनिरहेका भेटिन्छन् । आश्चर्य के छ भने आज गाउँ फिरेका अधिकांश मल्लाजवासी अफगानिस्तानदेखि इराकसम्म पुगेर अनेक कामकाजमा ‘अनुभवी’ बनेका भेटिन्छन् ।
गाउँको हकहित र प्रचारमा जुटेका अशोक खत्री मलेसियादेखि इराकसम्म बसेर घर फिरेका छन् भने गाउँमै होटल खोलेर बसेका राजेन्द्र जीसी पनि इराककै द्वन्द्वमाझ थोरतिनो कमाइ बोकेर आएका हुन् । मंसिरे दाईंको चटारोमा भेटिएका हरिबहादुर जीसी पनि ८ वर्ष संयुक्त अरबको दुबई बसेर घर फिरेका रहेछन् । यो क्षेत्रकै प्रसिद्ध मल्लाज कोतभगवती मन्दिर निर्माण समितिको अध्यक्ष रहेका क्याप्टेन टेकबहादुर घर्ती क्षत्री भारतीय गोर्खा सैनिकबाट अवकाश लिएर घर फिरेका रहेछन् तर उनको छोरो शेरबहादुर भने अहिले पनि अफगानिस्तमै कामकाजी रहेछन् ।
मल्लाज गाउँको सिद्धेश्वर शिवालयमा पुजारी रहेका ताप्लेजुङ, डुम्रिसेका पुरुषोत्तम अधिकारी पनि आफ्ना ३ छोराको वृत्तान्त टिपाउनमा उत्सुक भेटिए । उनका छोरामध्ये २ जना दुबई र एउटा ओमानमा थुप्रै वर्षयता रोजगारीमा जुटेका रहेछन् । सुन्तला बिक्रीका घरमा घरपरिवार धानिरहेका स्थानीय ज्योतिमण्डल माविका शिक्षक खेमबहादुर खत्रीको एउटा छोरो कोरिया र अर्को अस्ट्रेलियावासी बनेको रहेछ ।
‘बिदेसिने जे जति भए पनि आज यो गाउँ फर्कनेहरू पनि उसैगरी बढेका छन्,’ मल्लाज दरबारको आागनमा गफिँदै मुकुन्द भन्छन्, ‘मैले यो दरबार रेट्रोफिटिङ गर्दा स्काफोल्डिङदेखि अरू प्राविधिक कामसमेत यहीं गाउँकै केटाहरूबाट गराएँ । अरू जे जसो भए पनि सबै केटाले ‘स्किल’ सिकेर आएका रहेछन्, यो एकदमै खुसीको कुरा हो ।’
कर्पोरेट जीवनशैलीबाट वाक्क भएर मल्लाज फिरेका मुकुन्द मल्ल काठमाडौं छँदा बैंकर अनिल शाहदेखि सगरमाथा आरोही विनायक जे. मल्ल, धौलागिरी पस्मिनाका अग्रज शिवकुमार श्रेष्ठसम्मको संगतमा रहन्छन् । फेरि पनि सबैको उस्तै कर्पोरेट जीवन देखेर अनि सहरको कुदाकुद र धपेडीबाट दिक्क भएर दुई/चार दिनमै मल्लाज फिरिहाल्छन् । ‘राम्रो जीवनका लागि मेरो जिजुबाजे मल्लाजबाट काठमाडौं गएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो जीवनकै लागि म भने काठमाडौंबाट मल्लाज फर्किएको छु ।’
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ १०:२३
हलिउडको सूत्रमा आधारित फिल्म हो– चार्लिज एन्जल्स । यसमा प्रायः सबैजसो घटना र सिक्वेन्सहरू बुझ्न नियमित फिल्म दर्शकलाई कत्ति गाह्रो पर्दैन ।
मंसिर ६, २०७६ हेलो शुक्रबार
दुई हप्ता पहिले टर्मिनेटर हेरेका काठमाडौंका दर्शकका लागि यसपालि आइपुग्यो, चार्लिज एन्जल्स  । यी दुवै हलिउड फिल्मका केही समानता छन्  ।
यी दुवै एक्सन फिल्म हुन् । चार्लिज एन्जल्स एक्सन–कमेडी भए पनि यसमा एक्सनको मात्रा निकै ज्यादा छ । यी दुवै पहिले नै बनिसकेका, चलिसकेका र दर्शकको दिमागमा स्थापित भइसकेका फिल्मका नयाँ शृंखला हुन् ।
टर्मिनेटरको कथा २८ वर्षपछि अघि बढेको थियो, चार्लिज एन्जल्सको कथा भने अघि बढे पनि नबढेजस्तै छ । त्यो भनेको के हो भने फिल्ममा केही पात्र फेरिएका छन्, लोकेसन अलग छन् तर मुख्य कथा र कथाको शैलीमा कुनै अन्तर छैन । सोनीले यसलाई रिबुट भनेको छ । अर्थात् यो पहिले नै हलबाट उत्रिएर निर्जीव भएको कथामा फेरि प्राण भरिएको । त्यसलाई फेरि सुरु गरिएको ।
क्यामरुन डियाज र ड्र्यु बेरिमोरको सट्टा यसमा क्रिस्टिन स्टुवार्ट, नावोमी स्कट र एला बलिन्स्काले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका छन् । पहिले नै टेलिभिजन र ठूलो पर्दामा स्थापित भइसकेको कथा भएकाले रिबुट गरिएको भए पनि कथालाई जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याइएको भने छैन ।
एक निजी जासुसी कम्पनीको कथा हो यो । कम्पनीको मुखिया चार्ली कहिल्यै पर्दामा देखिँदैन । तर उसका एजेन्ट (एन्जल्स) भने जतासुकै देखिन्छन् । फिल्ममा दुई एजेन्ट र उनीहरूका बोस (बोज्ली) । सेनामा लेफ्टिनेन्ट भनेजस्तो यो कम्पनीमा बोज्ली एउटा पद हो । एन्जल्सचाहिँ ट्रेन्ड कमान्डो ।
फिल्मको कथा सुरु हुन्छ, ह्यामवर्ग (जर्मनी) को एउटा पावर कम्पनीबाट । कम्पनीले उत्पादन गरेको एउटा डिभाइस छ, कोलेस्टो । इनर्जी कन्जरभेसन डिभाइस भए पनि यसलाई खतरनाक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सम्भावना देखेपछि यसकी एक प्रोगामर (नाओमी स्कट) यसलाई रोक्ने प्रयत्नमा लाग्छिन् । तर कम्पनीमा उनका हाकिमहरूले यसलाई बेवास्ता गरेपछि उनी पुग्छिन्, चार्लिजका बोज्लीहरूसम्म । यो डिभाइसलाई बजारमा बेच्न हिँडेका मानिसलाई रोक्ने मिसनमा खटिन्छन्, एन्जलहरू । पूरै फिल्म यही मिसनको वरपर घुमेको छ ।
ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोबाट सुरु भएको कथा जर्मनीको ह्यामवर्ग र बर्लिन हुँदै टर्कीको इस्तानबुल आइपुग्छ । फिल्ममा केही कमेडी र धेरै एक्सन छ । तर यी दुवै कुरामा नवीनताको निकै कमी छ । यी पात्रहरू पहिले नै स्थापित भएका कारण दर्शकको चासो यो फिल्मप्रति हुनु स्वाभाविक हो । तर कथा र स्वाद पनि उस्तै पाए भने दर्शकले मन पराउँदैनन् । यही कुरा यो रिबुटमा पनि लागू भएको छ ।
चार्लिज एन्जल्सले सोनी कम्पनीले सोचेजति व्यापार नगरेको रिपोर्ट अमेरिकी मिडिया भेराइटीले प्रकाशित गरेको छ । भेराइटीका अनुसार यस वर्ष टर्मिनेटर, म्यान इन ब्ल्याकजस्ता अरू रिबुटले पनि बक्स अफिसमा आगो बाल्न सकेका छैनन् । बरु निकै कम आकिएको जोकरले बक्स अफिसलाई तताइदियो । हलिउडको परम्परागत सोचलाई यसले एक हिसाबले चुनौती पनि दिएको छ । व्यापार गर्नका लागि चलेका ब्रान्डले मात्र हुँदैन । फ्रेन्चाइज वा सिक्वेल बनाउँदैमा दर्शक ओइरिन्छन् भन्ने सत्य होइन भन्ने यस वर्षको बक्स अफिसले देखाएको छ ।
ट्वाइलाइट सागादेखि थुप्रै फिल्ममा देखिएकी र कुनै बेला हलिउडकी सबभन्दा महँगी हिरोइन बनेकी क्रिस्टिन स्टुआर्ट यो फिल्ममा छन् । फिल्मलाई एलिजाबेथ ब्यांक्सले निर्देशन गरेकी हुन् । उनले यसलाई लेखेकी पनि हुन् र अभिनय पनि गरेकी छन् । यो हलिउडको सूत्रमा आधारित फिल्म हो । जसका प्रायः सबैजसो घटना र सिक्वेन्सहरू बुझ्न नियमित फिल्म दर्शकलाई कत्ति गाह्रो पर्दैन । न त यसले जीवनलाई नयाँ दृष्टिले हेर्छ न मनोरञ्जनका कुनै नयाँ पाटो नै खोल्छ ।
हलिउडले चलाएको यो रिबुटको रन्को बलिउडतिर पनि आइसकेको छ । तर जसरी हलिउडलाई यसले निराश बनाइरहेको छ, हेरौं बलिउडले कतिन्जेल यसलाई बिकाउन सक्छ ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १०:५०